Zvakanakira bootstrapping yeCommerce | ECommerce nhau
Iwe unogona kusaziva izvo zvinorehwa nechizvarwa chinotevera chirevo, asi zvinogona kubatsira zvakanyanya mukuvandudza kwechitoro chako chepamhepo kana kutengesa. Nekuti pakuita bootstrapping ishoko remutauro rinouya kubva kuChirungu uye rinoreva kutanga chimwe chinhu chisina zviwanikwa kana zviine mashoma zviwanikwa. Mukutaura, haina kunyanyisa kuenderana nerudzi urwu rwebhizinesi, asi kana tikatsvaga mune uyu musoro, iwe uchaona kuti wakanyanya kupfuura zvaunogona kufunga pakutanga.
Nekuti bootstrapping ndiyo yekutanga nzira yekutanga chaiyo yekusvika parudzi rwebhizinesi pawakagadzwa. Nekuti zvirokwazvo, kune avo vanonzwa izwi rekuti rebootstrapping kekutanga, heino tsananguro ipfupi. Kukura bhizinesi pasina mari yekunze. Izvo zvinowanzo kuve nekutsvagirazve purofiti kasingaperi kuti iwedzere mari.
Kubva pane iyi nzira ine hunyanzvi kune chikamu chikuru chevashandisi, hazvisi zvishoma ichokwadi kuti izwi iri rinokubatsira wedzera nguva yekubhadhara kune vanotengesa. Nekuti pese paunoshanda nemhando hombe, inokupa iwe mari yekubhadhara mazuva makumi matanhatu kusvika makumi mapfumbamwe. Iyi imwe nzira yekuzvibhadharira mari sekureba sekukwanisa kwako kutengesa icho chigadzirwa risati ratarwa.
1 Bootstrapping: ndezvipi zvipo zvako zvinonyanya kukosha?
2 Hapana zvinofurira zvekunze
3 Sekushambadzira kwebhizinesi
4 Zvinhu zvinopesana nekuishandisa
Bootstrapping: ndezvipi zvipo zvako zvinonyanya kukosha?
Kana iwe uchiziva zvese zvinoratidzwa uye zvinomiririrwa nezwi iri rekuvandudza, izvo zvarinogona kupa kuchitoro chako chepamhepo kana bhizinesi hazviite. Semuenzaniso kuburikidza nezviitiko zvinotevera zvaticha taura pazasi:
Kusava nyore ndeimwe yehunhu hwayo hwakakosha, kunyangwe pakutanga zvingaratidzika sezvakasiyana. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti mushure mezvose chishandiso chiri nyore kushandisa, chakashandurwa kune chero programmer uye icho chinokutendera iwe kuti ugadzire makuru mawebhusaiti munguva pfupi. Uye zvakare, Bootstrap inonzwisisika, saka inobatsira kwazvo basa redu nekuchengetedza kwakakosha munguva yaunofanira kuzvipira kune aya mabasa ehunyanzvi.
Inochinjika kune masocial network
Chimwe chezvinhu zvakasarudzika izvo zvinoratidzwa neBootstrap parizvino ndechekuti yakagadziriswa mukati mekambani yeTwitter pakutanga kuti ishandiswe mukati, uye yakazogovaniswa kunze. Kusiya mamwe eanowanzoitika maitiro eiyi simba pasocial network kutenderera pasirese. Ichiri kune rumwe rutivi, inoshanda kusimudzira kushanda kwayo mubhizinesi rako kana chitoro chepamhepo. Nekuonekwa kunogona kuunza kumutsara webhizinesi rako kubva ikozvino.
Batsira kudhirowa kwemajitari
Hapana mubvunzo kuti rudzi urwu rwekudzidzisa runokutendera iwe kukura nhanho nhanho, kusanganisa zviito uye ruzivo zvishoma nezvishoma, zvichiita kuti ive yakanaka kune avo vanoda kushandisa ruzivo rwezvebasa ravo kune bhizimusi. Seimwe yeakanyanya kukosha zvinhu kubva ikozvino zvichienda mberi.
Kubva kupi uye zvechokwadi hazvidi kuti utaure varimi uye usangane nenguva yavo, sezvo izvi zvichisarudzika chete namuzvinabhizimusi. Kana zvisiri, pane kudaro, ihurongwa hunonyanya kudzidzisa nezvekurongeka uye mutoro, hunyanzvi hunokosheswa mumusika wevashandi. Saka kuti nenzira iyi, iwe wakanyatsogadzirira kunatsiridza zvishoma nezvishoma basa rako rehunyanzvi sezvo kuri kupera kwezuva izvo zvinosanganisirwa mune aya chaiwo kesi.
Matambudziko mashoma muiyo portfolio
Aya maitiro akabudirira kwazvo nhasi, nekuti iyo matambudziko emari ndizvo zvipingamupinyi zvikuru ku tanga bhizinesi. Kune ruzhinji rwevaya vanosarudza kuita, kuvapo kwevanowirirana navo, vatengesi kana rubatsiro rwemabhizimusi hakuna zvakunobatsira. Ichi chinhu chinofanirwa kutarisirwa kana uchigadzira imwe nzira mukutangisa kwechitoro chepamhepo kana kutengeserana kubva zvino zvichienda mberi.
Ndichiri kune rimwe divi, haufanire kukanganwa mune chero mamiriro ezvinhu kuti kana pakupedzisira iwe uine zano mupfungwa, usarasikirwa nemukana we kushaya mari, hadzisi dzese sarudzo dzemabhizimusi dzinoda izvo. Icho chinofanirwa kuve chidzidzo icho iwe chaunofanirwa kuisa maererano nezve kugamuchirwa kwetemu ino pakukwira kwenzvimbo yedhijitari. Uye pamusoro pezvimwe zvakajairika kana zvechinyakare kubva kune ese maonere aunogona kutarisa chero nguva uye mamiriro.
Hapana zvinofurira zvekunze
Chero zvazvingaitika, kune zvakawanda zvakawanda mabhenefiti iwe aunowana kuburikidza neiyi pfungwa uye ayo anogona kukupa imwe pfungwa kana imwe kuti uise mukuita kusimudzira mutsara wako webhizinesi kubva panguva ino chaiyo. Mukati meiyi nzira yakajairika, hapana mubvunzo kuti iwe unogona kuendesa mamwe eakakodzera maitiro eiyi pfungwa yatinotaura nezvayo muchinyorwa chino. Semuenzaniso, mumamiriro ezvinhu anotevera atinozokutsanangurira pazasi:
Muridzi kana varidzi vanochengetedza kutonga kwakazara pamusoro pekambani, pasina zvinofungwa nevekunze semuenzaniso uye izvo zvinokubatsira iwe kuchengetedza zvakakwana pamusoro pezvivakwa zvebhizinesi riri kutaurwa.
Zvakare, usakanganwa kuti pakupedzisira iwe une zviwanikwa zviripo, hapana zvikwereti, uye kuti zvinonyatso kudzikisa kudiwa kwekushandisa mari pakubhadhara chikwereti.
Kubata mari nokungwarira kubva pakutanga kunogadzira mashandisiro ekushandisa mari. Mupfungwa iyi, usakahadzika kuti ihurongwa hunokubatsira kubata rako redhijitari kana online bhizinesi mutsetse zvirinani kwazvo kubva pakutanga kwekugadzirwa kwayo.
Sechimwe chinhu chekuwedzera, zvinokubatsirawo kuti usarase pamidziyo inodhura yemahofisi nemidziyo. Tenga zvimwe zvakashandiswa kana, kana zvine musoro, rendi kuchengetedza mari. Ichi chidzidzo chaunogona kudzidza kubva panguva dzino dzeiyi yakasarudzika nzira yevanamuzvinabhizimusi mune yedhijitari chikamu, chero chimiro chayo uye chidimbu kwachiri kana chakamiswa.
Chimwe chezvinhu zvakakosha chaunofanira kuongorora panguva ino chakatorwa kubva pachokwadi chekuti bootstrapping inowanzo shandiswa kureva nzira dzekutengesa, uko kugona kugona kubudirira nemari yakawanda. Dzimwe nzira dzinoshanda uye dzisingadhuri dzinosanganisirwa mune ino yakasarudzika nzira yekutengesa kwatiri tese. Une semuenzaniso, mune dzinotevera kesi dzatiri kuzoratidza kubva panguva ino.
Ronga zviitiko zvakakosha muchitoro chako, uunze vagadziri kana vanozivikanwa kana mashefu - zvinoenderana nezvako zvigadzirwa - kupa vanotarisira vatengi uye vatove vatengi chikonzero chekuenda kunotenga. Seimwe yezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa mukutanga kwayo.
Gadzira email runyorwa rwevatengi uye tarisiro iwe yaunogona kuramba uchikurukura nayo. Uku ndiko kusiana kwaunogona kushandisa kana uchiisa ino yekushambadzira yedhijitari uye iyo inogona kukubatsira iwe kuisa zvirinani chitoro chako kana yekutengesa pamhepo. Uye chii chiri nani, kubva kune chero mhando zano raunogona kushandisa chero nguva.
Zvakare nenyaya yekuti ndiyo yakanyanya yakakodzera modhi yekudyidzana nemabhizimusi ekuwedzera kana vavakidzani kusimudzira runyorwa rwehunhu uhwu, kana ichi chiri chako chishuwo chiripo kubva ikozvino. Zvichida ichi ndicho chimwe chezvinhu zvisinganyanyo kuzivikanwa kune vazhinji vevashandisi uye kwaunogona kuzvibatanidza iwe pachako.
Mune dzino nguva iwe unofanirwa kufunga nechengetedzo yakasarudzika chimiro chekumisikidza kwayo kuitiswa. Icho hachisi chimwe kunze kweinotevera iyo yatichataura nezvayo: kana iwe urikuvaka bhizinesi usingabvunze kana kubvuma mari kubva kune vanoita mari, urikuita.
Zvinhu zvinopesana nekuishandisa
Nepo pane zvinopesana, iine akateedzana mhedzisiro isingadiwe iwe yaunofanira zvakare kufunga kuti ubudirire kana kwete yekushandisa kwayo pane yako nyanzvi chiitiko. Ivo chikamu chemwenje nemumvuri izvo inosanganisira kuitiswa kwayo pari zvino. Nekuti zvirinani, iwo haasi ese mabhenefiti panguva yekuzviita, sezvo kune rimwe divi zvine musoro kufunga kubva pane yakasarudzika nzira. Nekuti haugone kukanganwa kune rimwe divi kuti kune zvinoverengeka zvezvakaipa kana uchiramba zvekunze jekiseni remari:
Kukura kwebhizinesi kunogona kudzikiswa kana kukanganiswa kana kudiwa kuchipfuura kugona kwekambani kuverengera kana zvigadzirwa zvekutengesa.
Muzvinabhizimusi anotora ingangoita njodzi yezvemari nekusagovana mutoro nevashambadziri vekunze, vanoisa mari kutsigira kukura kwekambani.
Izvo zvinhu izvo zvaunofanirwa kutarisira kudzivirira mamiriro asingadiwe mukugadzirwa kwechitoro chako chepamhepo kana commerce kubva zvino zvichienda mberi. Saka kuti parege kuva nekushamisika kwerudzi rupi zvarwo kubva panguva ino zvichienda mberi. Uye ndiko kuti, shure kwezvose, chimwe chezvinangwa zvako zvakanyanya mune chero mamiriro ezvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvakanakira bootstrapping yeCommerce
Maitiro ekugadzirisa mifananidzo muWordPress?